Inrico T298s 3G / Wifi VHF रेडियो 137-174 मेगाहर्ट्ज (एन्ड्रोइड अनलक) EU / युके / अष्ट्रेलिया - नेटवर्क रेडियो
घर / रेडियो / नेटवर्क रेडियो / Inrico T298s 3G / Wifi VHF रेडियो 137-174 मेगाहर्ट्ज (एन्ड्रोइड अनलक) EU / युके / अष्ट्रेलिया
यस संस्करणको शुद्ध Android छ। प्रतियोगिताबाट सावधान हुनुहोस् जसले फर्मवेयर संस्करणहरू बेच्छ जसले प्लेस्टोरबाट अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न अनुमति दिँदैन। यदि तपाईं पहिले नै फरक विक्रेताबाट खरीद गर्नुभयो भने, तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ T298s अनलक गरिएको फर्मवेयर स्थापना गर्नुहोस् लोकप्रिय ह्याम रेडियो अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न।
Inrico T298s एक एम्बेडेड VHF एफएम ट्रान्सीभरको साथ एक रेडियो नेटवर्क हो जुन १००% कभरेज अनुमति दिन्छ। या त सेल वा रेडियो द्वारा, तपाईं सधैं जडान हुनेछ।
तपाईं सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ अलग TX र RX फ्रिक्वेन्सी, साथ साथै प्रोग्राम CTCSS टोनहरू पारंपरिक पुनरावर्तकको साथ प्रयोग गर्न।
Zello PTT वाकी टाकी संसारमा तपाईंलाई स्वागत छ!
नेटवर्क समर्थन: GSM900 / 1800 मेगाहर्ट्ज, WCDMA2100
प्रभुत्व फ्रिक्वेन्सी: १.० घगाहर्ट्ज
प्लेटफर्म: MTK 6572A
अपरेटिङ सिस्टम: एन्ड्रोइड 4.4.2
मेमोरी: G२ जीबी + G जीबी
विस्तारित मेमोरी: G२ जीबी सम्म
ब्याट्री क्षमता: m 3500 एमएएच
स्क्रीन टीपी डिस्प्ले: २.2.4QQV २ 240० * multi२ बहु-पोइन्ट टच स्क्रीन
अगाडि र पछाडि क्यामेरा, स्वचालित रूपमा फोकस गर्नुहोस्
सुपर-मजबूत stand०० घण्टा भन्दा बढि स्ट्यान्डबाई
-२-व्यासको स्पिकर डबल कक्षहरूको साथ
पोजिशनिंग सिस्टमले GPS + BeiDou लाई समर्थन गर्दछ
WIFI / BT / MP3 / MP4 समर्थन गर्नुहोस्
माइक्रो PPIN डाटा लाइन
IP54 सुरक्षा डिजाइन, सैन्य गुणवत्ता
VHF संस्करण (१137-१174 मेगाहर्ट्ज)
UHF संस्करण (-400००--470० मेगाहर्ट्ज)
प्रमाणपत्र: सीई एफसीसी रोहस प्रमाणपत्र
ब्याट्री क्षमता: 3500mAh
अधिकांश विश्वव्यापी वाहकहरूले यस मोडेललाई समर्थन गर्छन्। यद्यपि अमेरिकामा केवल एटी&T ले यस उपकरणलाई समर्थन गर्दछ।
Inrico T298s निर्देशन गाइड डाउनलोड गर्नुहोस्
2 लागि समीक्षाएँ Inrico T298s 3G / Wifi VHF रेडियो 137-174 मेगाहर्ट्ज (एन्ड्रोइड अनलक) EU / युके / अष्ट्रेलिया
CT1EIZ - डिसेम्बर 5, 2017
जाँच गर्नुहोस् कि यी रेडियोहरू कडा किसिमका छन्: https://www.youtube.com/watch?v=WyPIDvEmXJk
टिम 2E0CXQ - डिसेम्बर 23, 2017
यो असहज, राम्रोसँग बनेको रेडियोसँग धेरै खुसी भयो। एक पटक वाइफाइमा जडान भएको सिधा बाकस बाहिर काम गर्‍यो। केवल चुनौती भनेको अनस्क्रिन किबोर्डको रूपमा जानकारी इनपुट गर्नु हो जुन सानो छ र ठूला औलाहरूका साथ यसले केहि मेहनत लिएको थियो। मसँग Zello र IRN काम गर्दैछ, कुनै समस्या छैन। तपाइँका भिडियोहरू युट्युबमा धेरै उपयोगी पाए, धन्यबाद।
Inrico TM-7 3G / WiFi IRN मोबाइल नेटवर्क रेडियो (एन्ड्रोइड अनलक)
बिक्री! $299 $249 भाडोमा हाल
Inrico TM-8 3G / WiFi IRN मोबाइल नेटवर्क रेडियो (एन्ड्रोइड अनलक)
$299 भाडोमा हाल